CompTIA Zvidzidzo Zvisingagadziriki | CompTIA Career Pathways
Chii chinonzi CompTIA Stackable Certifications?
Iwe iwe iye zvino mune CompTIA Stackable Certification?
CompTIA Zvigadziriswe zvakasimba zvinogadziridzwa mukati me2018 uye dzinoona nyanzvi dzakagadzira zvakasiyana siyana zveCompTIA certifications.
Chimwe nechimwe cheScackable Certification chinoshandiswa kune chimwe chikamu mukati mukati meTI, kuratidza humwe hukuru hwehuwandu hwemashoko uye ruzivo. Vanotora mushure memaviri akavakwa CompTIA Career Pathways:
CompTIA Zvidzidzo zveSpackable zvinowedzera kugoverwa muzviitiko zvakazvimiririra zviitiko:
Nyanzvi: Kupinda-level IT nyanzvi ne 0-2 makore emakore
Professional: Mid-level IT vadzidzisi vane 2-5 makore emakore
Nyanzvi: Yakagadzirirwa IT vashandi vane 5 + makore ane ruzivo
Muchikamu chino, tichasvika muCompTIA Infrastructure uye Cybersecurity Career Pathways, tichitsvakurudza maSteckable Certifications anowanikwa pane imwe neimwe.
Kupfuurira kuburikidza neCompTIA Infrastructure Career Pathway inogamuchira ruzivo pamusoro pemhando dzakawanda dzeunyanzvi mukati meIt operations. Sezvaunofamba kubva kuUpistori kusvika kune Professional, iwe uchagadzirisa unyanzvi hwekudzivirira mukati mehutachiona hweTI, kuwedzera huwandu hwenyanzvi dzaunogona kushanda mukati.
Dzidzo dzeScackable mukati megwagwa iyi dzinotorwa nekuzadzisa mukana we CompTIA A +, Network +, Security +, Server +, Linux + uye Cloud + zvidzidzo.
04294 CompTIA Cert Badges_Specialist - CIOSCompTIA IT Operations Specialist (CIOS) - Gamuchira A + uye Network + uye iwe ucharatidza kunzwisisa kwako kukuru kwechigadzirwa nemishonga inoshandiswa kuti IT iite zvikamu, uye ruzivo rwekufambisa mberi.
04294 CompTIA Cert Badges_Specialist - CSSSCompTIA Systems Support Specialist (CSSS) - Gamuchira A + neLinux + kuti uratidze kuti unonzwisisa chirongwa cheI IT uye zvigadzirwa zvinokosha uye unonzwisisa zvakadzama maSunwork working frameworks.
04294 CompTIA Cert Badges_Specialist - CCAPCompTIA Cloud Admin Professional (CCAP) - Gamuchira Network + uye Cloud + kuratidze kuti unodzidza kushanda kwemakore uye kufambisa mberi kwenyika.
04294 CompTIA Cert Badges_Professional - CNIPCompTIA Network Infrastructure Professional (CNIP) - Achiza Network + uye Server + kuratidzira mafungiro ako kune seva uye kushandiswa kwenhepfenyuro.
04294 CompTIA Cert Badges_Professional - CLNPCompTIA Linux Network Professional (CLNP) - Gadzira Network + neLinux + kuti uratidze unyanzvi hwako hunoenda mberi pamusoro pekugadzira mitambo uye Linux working frameworks.
Kufambira mberi kuburikidza neCompTIA Cybersecurity Career Pathway icharatidza unyanzvi hwako hwepamusoro kune dzimwe nzvimbo dzekuchengeteka.
Kutevera nzira kunokutora kubva kune anotanga kuenda kumudzidzisi wekuchengeteka, kuratidza kuti wakakwanisa kushanda pane zvakasiyana-siyana zvekutsvaga kwekuchengeteka kwezvikamu.
Dzidzo dzeScackable mukati megwagwa iyi dzinotorwa nekuzadzisa kusanganiswa kweCompTIA's A +, Network +, Security +, CySA + uye CASP zvidzidzo.
Nzira ichawedzera kune yechipiri 50% ye2018, nekutumirwa kwePenTest + - kuti uwane mamwe mashoko, tsvakurudza mutungamiri uyu kune PenTest +.
04294 CompTIA Cert Badges-CSISCompTIA Secure Infrastructure Specialist (CSIS) - Ita A +, Network + uye Chengetedzo + uye uratidze kunzwisisa kwako kwemasitereti, purogiramu yePC, midziyo - uyezve kuwedzera maitiro ekuchengetedza.
04294 CompTIA Cert Badges_Professional - CSCPCompTIA Secure Cloud Professional (CSCP) - Gamuchira zvose Zvokuchengetedza + uye Cloud + kuti uratidze kunzwisisa kwako kwegore mumhepo uye unyanzvi hunodiwa kuti uchengetedze hutsva mukati mebhizimisi.
04294 CompTIA Cert Badges_Professional - CSAPCompTIA Security Analytics Professional (CSAP) - Gamuchirai Security + uye CySA + kuratidzira kukwanisa kwako kusiyanisa uye kugadzirisa njodzi dzekuchengetedza nokukurumidza sezvinofungidzirwa nekuunganidza uye kuputsa mashoko.
CompTIA Network Vulnerability Assessment Professional (CNVAP) - Ita kuti Security + uye PenTest + ikuratidze kuti une zvinhu zvakanaka kuti uedze bhizinesi rako 'zvigadziriro zvekuchengeteka.
CompTIA Network Security Professional (CNSP) - Ita kuti Security +, PenTest + neCySA + ikuratidzei kuti zvinhu zvakafanira zvinopedzisa kugadzirisa kushanda kwemhepo kusina simba uye zviri kuwedzera kugadzirira kutungamirira zvidzidzo zvekuchengeteka.
04294 CompTIA Cert Badges_Professional - CSAECompTIA Security Analytics Expert (CSAE) - Gamuchira kuchengeteka, + CySA + uye CASP kuratidza unyanzvi hwezvekuchengetedza. Iwe ucharatidza mukuru wekuchengeteka aptitude, kuchengetedzwa kwekuongorora nekuchengetedzwa kweTI mukati mekutengesa.
CompTIA Expert Infrastructure Expert (CSIE) - Gara kuchengetedzwa, + CySA +, PenTest + uye CASP kuratidza unyanzvi hunyanzvi hwokuchengeteka kwezvinhu. Ichi chivimbiso chechibvumirano chinobvumira kudzidzira kwekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa, kuongorora kupindira uye kugadzirisa kuchengetedzwa kweT IT.
Pamusana pekana kuti iwe unobata zvakanakira kuwirirana kwezvidzidzo zvinotarisirwa, iwe uchave wakagamuchira zvakakwana CompTIA Stackable Certification. Iko kunyanya kuisa muakaunti yako yekugadzirisa kuti unyore uye kuratidza yako itsva chiyeuchidzo nokukurumidza.
Takakurayira kuti uwedzere zvakadhindwa zvakapfurikidza kuzvezvema yako kana LinkedIn profile kuti uve nehutano hwako hutsva.
Pachinhu chakanaka chokuti iwe wakazadzisa chiziviso chako pamberi peCompTIA isati yakuratidza kubhadharwa zvinodiwa, unogona kuwana Zvidzidzo zvako zveStackable kuburikidza nekudzokorora kwako ikozvino kubvumirwa.
Nzira yako yepamusoro-soro yemasimba yekuwedzera Stackable Certifications
Dzorera CompTIA yako chidimbu chechipiri nokukurumidza kupfuura tsika yekugadzirira. Gadzirira nokukurumidza ne Firebrand pane yakagadziriswa CompTIA course uye iwe uchazobvumirwa kuenda kuchikoro chepamutemo pedyo nevevadzidzisi vanobvumirwa:
CompTIA A + - 4 mazuva
CompTIA Network + - 3 mazuva
CompTIA Security + - 3 mazuva
CompTIA Cloud + - 3 mazuva
Firebrand iCompTIA Platinum Partner. Kuburikidza neChidzidzo chedu chinoshamisa | Lab | Dzokorora ruzivo rwekudzidza, iwe uchange uchinge wakanyura mumasangano ehurumende yemamodules ane zvishoma maawa 12 'kugadzirira zuva rimwe nerimwe.
Iwe uchagara pane zvatinokurudzira tichigadzirisa mazano ekudzidzisa, kusununguka kubva pamusika wezuva nezuva hupenyu. Iwe unogarawo iwe CompTIA kuongorora (s) kuwedzera kwaunoita kubva kuchikoro chako pa Firebrand's Pearson View kuongorora kutsvaga.